गायक पुस्कल शर्माले किन सुटुक्क विहे गरे? Global TV Nepal
गायक पुस्कल शर्माले किन सुटुक्क विहे गरे?
ग्लोवल टि.भी. मङ्लबार, पुस २०, २०७८ 0
काठमाडौं,पुस २०गते । गायक पुस्कल शर्मा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन् । पाल्पाका पुस्कलले रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको शीतलनगर निवासी सबी क्षेत्रीसँग विवाह गरेका हुन् । यद्यपि, उनको विवाह हालसालै भएको भने होइन । एक वर्षअघि आफू वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको पुस्कलले बताए ।
विवाहको जिज्ञासामा पुस्कलले संक्षिप्तमा भने, ‘हो, मैले गत वर्ष विवाह गरेको हुँ । त्यो समयको माहोल त्यस्तै थियो, कोरोना अनि लकडाउनको समय थियो । त्यसैले कसैलाई जानकारी नदिई सामान्य हिसाबले विवाह गरेका थियौं । त्यसयता पनि जानकारी दिने माहोल बनिरहेको थिएन ।’
लोकदोहोरी क्षेत्रमा समेत उनको विवाहको जानकारी धेरैलाई छैन । केही दिनअघि पुस्कलले बुटवलमा जारी ‘चौथो राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला’मा प्रस्तुति दिएका थिए । जहाँ स्टेजमा आफ्नो नयाँ गीत ‘तिम्रो थर मेरो थर’ गाउँदै गर्दा आफ्नी श्रीमतीबारे पनि जानकारी दिएका थिए ।
पुस्कलले गत शुक्रबार आफ्नो नयाँ गीत ‘तिम्रो थर मेरो थर’ सार्वजनिक गरेका छन् । युट्युब र टिकटकमा राम्रो चर्चा पाइरहेको यो गीतको भिडियोमा पुस्कल आफ्नी श्रीमतीसँग प्रस्तुत भएका छन् । यसअघि ‘के दिउँ मायालाई चिनो’ गीतको भिडियोमा समेत उनकी श्रीमतीले छोटो भूमिकामा अभिनय गरेकी थिइन् ।
जीवनसंगिनीबारे पुस्कलले भने, ‘उनी खासमा संगीत क्षेत्रकी होइनन् । बीएस्सी एग्रिकल्चर सकाएर मास्टर्स पढ्दै छिन् । वास्तवमा भन्नुभर्दा बिहेअघि उनले मलाई राम्रोसँग चिन्दा पनि चिन्दिनथिन् ।’
पुस्कल लोकदोहोरीमा राम्रो ‘फ्यान फ्लोइङ’ भएका गायक मानिन्छन् । मिडियामा कमै आउने उनको ‘मुटु जलाई जलाई’ सर्वाधिक हिट गीत मानिन्छ । उनी आफ्ना गीतमा प्रायः आफैं अभिनय समेत गर्दछन् ।
नेपाल मिडिया अवार्ड’को मनोनयन सार्वजनिक ,२०विधामा अवार्ड प्रदान गरिने
रेश्मा बमजनको नयाँ सेलो ‘मूगाको माला’ (भिडियो सहित)
गुरुङ समुदायको ल्होसारमा सार्वजनिक बिदा दिन माग
दोलखाको पर्यटकीय क्षेत्र कालिञ्चोकमा हिमपात,होटल व्यवसायी खुसी
एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमाको नेपाल भ्रमण सन्देश
कोरोनाले विथोलिँएको शैक्षिकसत्र चैतमा पूरा हुन मुस्किल
भारतीय सेनाध्यक्ष आज आँउदै, भोलि मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिने
छिमेकीमा चुनाव(लघु कथा): खेमराज शर्मा
एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता
सुनको भाउ हजार रुपैयाँले बढ्यो